ရောမမြို့ဥရောပအကောင်းဆုံးရေခဲမုန့်ဆိုင်ခန်းများ၏တဦးတည်းမှနေရာဖြစ်သည်, နို့အဖြစ်. အဆိုပါမြို့ရေခဲမုန့်ချစ်သူများနှင့်ပြည့်ဝ၏. gelato ခံစားလူများ picturesque မြင်ကွင်းများပုံမှန်များမှာ. သို့သျောလညျး, မရေမတွက်နိုင်သော gelato ဆိုင်များနှင့်အတူတစ်မြို့အတွက်, တအဖြစ်ထွက်ရပ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် that any gelato lover needs to visit. မရေမတွက်နိုင်သောခရီးသွားဧည့်နှင့်ဒေသခံများအီလတ်လာကြမှစုပြုံ. အဘယ်အရာကိုသင်မေးစေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့ရေခဲမုန့်နိုင်အောင်ထူးခြားတဲ့စေနိုင်သည်? ပထမဦးစွာ, များစွာသောလူသူတို့ကပူဇော်သူဌေးနှင့်အရသာအရသာကိုခံစား. သူတို့ကနေ့စဉ်မိမိတို့၏ gelato ပွငျဆငျခွငျးနှငျ့သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်. သူတို့ရဲ့ Ice Cream ချမ်းသာ creamy များမှာ, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်. သငျသညျကိုအံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်အီလတ်နည်းလမ်းအဘယျသို့လာကြ, သငျသညျကဘာသာကိုသိရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် “နို့လိုပဲ”. နို့ကိုမုန်းသူများပင်သူတို့၏နို့ရည်အရသာကိုခံစားနိုင်သည်. အရသာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒုတိယအ, လူတွေဆိုင်၏လေထုကိုးကွယ်. ဒါဟာရောမမြို့၏အနှစ်သာရနှင့်ခံစားထည့်သွင်း.
Fantastic ရေခဲမုန့်ဂျာမနီမှများစွာသောအပေါင်းအသင်းတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ. သို့သျောလညျး, Ballabeni ရေခဲမုန့် ယင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထက်တောင်ဦးနဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါသည်. ဤထူးခြားသောရေခဲမုန့်ဆိုင်လေးသည်မြူးနစ်တွင်တည်ရှိပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်. နန်းတော် Giorgio Ballabeni ပိုင်, ရေခဲမုန့်အောင်၏အနုပညာအတွက် grandmaster. သူဟာဝါသနာအဖြစ်ရေခဲမုန့်အတွက်စတင်, နှင့်မြူးနစ်အပေါငျးတို့သကကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည်. အတော်များများလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံများစတိုးဆိုင်ကိုချစ်, ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထွက်ခွာ. သင်သည်သူတို့၏ရေခဲမုန့်ကြိုးစားတဲ့အခါ, ဒါဟာဘာကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်. သူတို့ကစုံလင်ဖို့သူတို့ရဲ့ယာဉ်ရယူနိုင်ပါတယ်နှင့်သူတို့၏လယ်ပြင်၌အကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ပါပြီ. သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းကျုံးအတွင်းကတဆင့်လာ. တစ်ဦးအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေသူတို့ရေခဲမုန့်ထရပ်ကားများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပါတီများမှဖြည့်တင်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ!
သငျသညျအစဉျအမွဲဟန်ဂေရီ၏မြို့တော်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေသင့်တယ်, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါစေ Gelarto Rosa. ဤသည်အံ့သြဖွယ်ရေခဲမုန့်စတိုးဆိုင်ထဲမှာဖြစ်ပါသည် ဘူဒါပက်၏နှလုံး. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. များမှာ, ရင်းနှီးမှု, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု, သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်မြင်နိုင်ရာဖြစ်ပါသည်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သူတို့လယ်ပြင်၌စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်. အဖြစ်ဝေးသူတို့၏ရေခဲမုန့်အဖြစ်, သငျသညျကိုသူတို့ကသာအကောင်းဆုံးအော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုစကားကိုနားထောငျဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်. တိုင်းအလွန်ကြီးစွာသောရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတုရေခဲမုန့်ကိုရှောင်. သို့သျောလညျး, အဘယ်အရာကို Gelarto ရိုထူးခြားတဲ့စေသည်နေတဲ့နှင်းဆီသို့ရေခဲမုန့်ပုံဖော်ဖို့သူတို့ရဲ့မှုပညာရှငျနှငျ့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျပူပြင်းတဲ့နေ့ကနေစဉ်အတွင်း Szent Istvan Square ကိုအစဉ်အမြဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်, နှင်းဆီပန်းရေခဲမုန့်နှင့်အတူလူအများလှည့်ပတ်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
ဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသောအရသာနှင့်အနံ့အရသာကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်? စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား ယခု. ပြီးနောက်, you can experience the delicious world of ice cream in Europe.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ Ice Cream စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-eat-ice-cream-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#cooldown #icecream #traveleurope eurotrip အစားသောင်းကြမ်းသူ